Ka dhig android -kaaga mid raaxo leh oo fog | Androidsis
Ka dhig android kaaga mid raaxo leh oo fog
Zack | | Codsiyada Android, Tababarada
Maanta waxaan kuu keenayaa dhowr qalab oo aad ku xakamayn karto Smartphone-kaaga iyo Tablet-kaaga oo fog adigoo adeegsanaya PC-ga.
Codsigan ayaa noo oggolaan doona inaan ku xakameyno taleefannada casriga ah PC-ga. Waxaan si fudud u soo dejisanaa arjiga (bilaash), socodsiinaa oo wuxuu na tusi doonaa cinwaan web iyo password.
Waxaan ka fureynaa kumbuyuutarka kumbuyuutarka kumbuyuutarka waxaanna galnaa cinwaanka websaydhka arjigu na tusayo. Waxaan galnaa erayga sirta ah waxaanna gali doonaa nooc desktop ah.
Miiskaan waan maamuli karnaa dhammaan waxyaabaha qalabkeenna ku jira, daawashada iyo qorista farriimaha, daawashada xiriirada, muusigga, fiidiyaha, barnaamijyada tirtirka, nuqul ka qaadashada kombiyuutarkaaga illaa Smartphone ama Tablet, iwm.
Mararka qaarkood waa wax laga xumaado in wax lagu qoro Smartphone-keena. Gaar ahaan haddii ay tahay inaan qoro qoraal fara badan.
Codsigan waxaan ku qori karnaa kombuyuutarkayaga iyo in meel fog laga dheehan karo qalabkeena Android.
Tani waxaan u soo dejisanaa arjiga. Waa inaan tagnaa setinka luqadda iyo qoraalka a oo aan dhaqaajino xulashada Keyboard-ka Wifi. Markaan rabno inaan wax qorno sidoo kale waa inaan dhaqaajinaa Keyboard-ka Wifi.
Waan socodsiineynaa arjiga waxayna na tuseysaa cinwaan degel ah. Waxaan galnaa cinwaanka shabakada biraawsarkayaga kombuyuutarkayaga. Dhinaca midig waxay na tusi doontaa haddii aaladdayada iyo kumbuyuutarka ay isku xiran yihiin.
Wax kasta oo aan ku qorno sanduuqa qoraalka hoose waxaa lagu soo bandhigi doonaa shaashadda aaladdayada.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan barnaamijyadan ayaa ah inay fududahay in la isticmaalo runtiina way shaqeeyaan :-).
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Ka dhig android kaaga mid raaxo leh oo fog
Hadda waxaan ku iibsaday xperia adroid oo waxaan ka hadlayaa waxyaabaha jira, waxaan isku dayayaa kuwan si aan u arko sida ay u shaqeyso Waad ku mahadsan tahay macluumaadka.
U jawaab John - erayada
Si fiican ayaa loo rakibay oo loo tijaabiyay.
Jaleecada hore waa mid cajiib ah, laakiin 5 daqiiqo kadib waxaan arkay 2 guuldarooyin, oo aad muhiim iigu ah.
Maaha wax ka maqan ama waxyaabo aan jeclaan lahaa inuu sameeyo oo aanu samayn, laakiin waa waxyaalo uu sameeyo laakiin aan qabow ahayn:
- Sawirro: marka sawirrada laga dhoofiyo mobilada ee PC -ga, waxay wax walba gelineysaa .zip oo taariikhda / waqtiga sawirku lumo. Haddii aad mid mid u dhoofiso, waxaad sidoo kale lumineysaa xogtaas.
- Muusig: Haddii aad ku dhex jirto faylka Muusiga waxaad haysataa .mp3s oo lagu dhejiyay faylal (tusaale ahaan, disc kasta oo ku jira galka) ma awoodi doonto inuu helo oo tuso liiskiisa.
Haddii kale, waa codsi la yaab leh, oo ku dhowaad sheekooyinka sayniska.
agusti bau dijo
Kaliya 3 maalmood ka hor ayaan barnaamijkayga u geliyay google play ... waxaan u malaynayaa inay tahay sababta uusan halkan u joogin ... laakiin waa meel fog, oo loogu talagalay mac. Blog weyn mar walba 🙂
Ka jawaab agusti bau
Khariidadaha Google 6.0, taabashada ICS iyo khariidadaha gudaha
DROID 4, Motorola Razr oo wata kumbuyuutarka QWERTY